Chrome 96 inosvika ine otomatiki redirection kubva paHTTP kuenda kuHTTPS | Linux Addicts
pablinux | 15/11/2021 18:28 | Noticias
Pave nemavhiki mana ikozvino, shoma zuva rimwe nekuti nhasi rave mberi, Google vakakanda inogadziridza kune yako bhurawuza yewebhu iyo yakataura zvakanaka kune FTP rutsigiro. Nhasi, sezvatakataura zuva rapfuura pane zvaitarisirwa, kambani yakakurumbira kune inonyanya kushandiswa pawebhu injini yekutsvaga munyika akakanda Chrome 96, imwe shanduro isina zvinhu zvinofadza chaizvo, asi ine kanenge imwe chete yandinofunga kuti inofadza.
Chrome 96 inotungamira otomatiki kubva paHTTP kuenda kuHTTPS kana marekodhi eHTTPS DNS apihwa. Pakati pezvimwe zvitsva pane akati wandei ane hukama nezvatinogona kuona, sezvo imwe ine hukama nePNG mufananidzo fomati uye mamwe maviri ane mutauro weCSS. Pazasi iwe une runyorwa rwenhau dzakatanhamara dzakasvika neChrome 96.
Chrome 96 inosimbisa
Otomatiki redirection kubva kuHTTP kuenda kuHTTPS kana marekodhi eHTTPS DNS apihwa. Zvino kana marekodhi eDNS ari kuburikidza neHTTPS, inofunga kuti webhusaiti yacho inowanikwawo kuburikidza neHTTPS uye inoshandisa izvozvo nekukasira.
A fallback cache yakagoneswa kune desktop. Izvi zvinobvumira kufamba nekukurumidza kumapeji ewebhu akamboshanyirwa.
Kukopa mafaera ePNG kune clipboard inochengetedza metadata yefaira pane kuidzima.
CSS midhiya mibvunzo inowedzera "prefer-contrast" ficha kana paine inoshanda sisitimu yaunofarira yakatenderedza yakakwira musiyano modhi paMacOS kana Windows.
Tsigiro yeCSS yecalc (nhamba) munzvimbo dzinotsigirwa chete nhamba yakazara.
Chrome 96 yaburitswa masikati ano, saka vashandisi veWindows uye macOS vanogona ikozvino kuidhawunirodha kubva kune yavo website yepamutemo. Mumaawa mashoma anotevera ichaonekwawo mune repository iyo inowedzerwa otomatiki kana browser yaiswa pane mamwe maLinux kugoverwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome 96 inosvika ine otomatiki redirection kubva kuHTTP kuenda kuHTTPS nedzimwe nhau